သတင်း - ကားမှန်အကြောင်း ဘယ်လောက်သိလဲ။
ကားများရေပန်းစားလာမှုနှင့် လူနေမှုအဆင့်အတန်း တိုးတက်လာမှုနှင့်အတူ ကားပိုင်ရှင်များသည် ကားအလှတရား၊ ကားအသွင်အပြင်၊ ကားပါဝါစသည်ဖြင့် တဖြည်းဖြည်း အာရုံစိုက်လာခဲ့ကြသော်လည်း ကားမောင်းသည့်အခါတိုင်း ကြုံရမည့် အဓိကဆက်စပ်ပစ္စည်းများဖြစ်သည့် ကားမှန်များကို လျစ်လျူရှုခဲ့သည်။
ကားမှန်ကွဲတဲ့အခါ၊ ဈေးပေါရင်ဝယ်၊ ဈေးသက်သာလေ ပိုကောင်းမယ် ထင်ပါတယ်။ မင်းမြင်နေသရွေ့ လေနဲ့မိုးအတွက်တင်မဟုတ်ဘူး။ မှားတယ်၊ မှားတယ်၊ မှားတယ်။ အန္တရာယ်တွေအကြောင်း ဘယ်လောက်သိလဲ။ ကားမောင်းတဲ့အခါ အမြဲတမ်း အဆင်မပြေဖြစ်ပြီး ခေါင်းမူးတတ်ပါတယ်။ သင်သည် အမျိုးမျိုးသော စစ်ဆေးမှုများအတွက် ဆေးရုံသို့သွား၍ သင့်တွင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာရှိနေသည်ဟု သံသယရှိသော်လည်း စစ်ဆေးမှုအပြီးတွင် သင့်တွင် ဘာမှ မဖြစ်ခဲ့ပါ။ ဟိုးအရင်တုန်းက အတုအယောင်နဲ့ အမိုက်စား ကားမှန်တစ်ချပ်ကို ပြောင်းဖူးတယ်လို့ ထင်ပါသလား။
စားသုံးသူများအတွက် နာမည်ပျက်စာရင်းကို ဖော်ထုတ်ရန်အတွက် မရိုးသားသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအများအပြားကို နှစ်စဉ် ဖော်ထုတ်ပြသသွားမည်ဖြစ်သည်။ ဤအမည်ပျက်စာရင်းများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝနှင့် နီးကပ်စွာဆက်စပ်နေပါသည်။ ယနေ့၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား မော်တော်ကားမှန်လောကသို့ ခေါ်ဆောင်ကာ ရွှေရောင်မျက်လုံးမုဒ်ကို ဖွင့်ပါမည်။
1. မှန်အတုနှင့် အမိုက်စား ကားမှန်များကို နားလည်မှုလွဲခြင်း။
ကားပိုင်ရှင်များသည် ကားမှန်များကို စျေးသက်သက်သာသာနှင့် ဝယ်သည်- သင်ဝယ်သည့်အချိန်၌သာ ပျော်ရွှင်နေပါသည်။ ပျော်ရွှင်ခြင်း သို့မဟုတ် သေစေမည့်အချိန်မရှိပါ။
အထက်ပါပုံသည် အင်တာနက်ပေါ်တွင် ကားမတော်တဆမှုတစ်ခု၏ အမိုက်စားဓာတ်ပုံဖြစ်သည်။ အမှန်မှာ၊ အတုအပနှင့် အမိုက်စား ကားမှန်များကို ဝယ်ယူခြင်းသည် ငွေအနည်းငယ် သက်သာစေပြီး ယာယီပျော်ရွှင်မှုကို ကျေနပ်စေသည်၊ သို့သော် အနာဂတ်တွင် ကြောက်စရာကောင်းလိမ့်မည် ။ မင်းကံကောင်းရင် ကားမှန်ကို တစ်သက်လုံး အစားထိုးဖို့ မလိုဘူးဆိုတာ မင်းသိပါတယ်။ ဤအကျိုးအတွက် သင့်ကိုယ်သင် အဘယ်ကြောင့် စိုးရိမ်နေရသနည်း။ လုံခြုံရေးသည် အဖိုးမဖြတ်နိုင်ပါ။
ကြီးမားသောအမြတ်အစွန်းရရှိရန် ကုန်ပစ္စည်းအတုများကို ရောင်းချခြင်း- အချို့သော ထုတ်လုပ်သူအချို့သည် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာရန်အတွက် ကြီးမားသောအမြတ်အစွန်းများရရှိရန် အရည်အသွေးနိမ့်ပြီး အမိုက်စား အော်တိုမှန်အတုများကို ထုတ်လုပ်ရောင်းချကြသည်။
ဒီလိုအပြုအမူမျိုးဟာ တရားမ၀င်ဘူးဆိုတာ မင်းသိပါတယ်။ ဤအကျိုးအတွက် သင်သည် အကျဉ်းချခြင်းနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အပြစ်ရှိခြင်း၏ ဘေးဒုက္ခကို ရင်ဆိုင်ရမည်။ ဒီကားမှန် အတုနဲ့ အမိုက်စား အပိုင်းအစက မိသားစု & hellip&hellip ကို ဖျက်စီးနိုင်လို့ပါပဲ။
အော်တိုမှန်ဈေးကွက်တွင် အတုများ ပျံ့နှံ့နေပါသည်။ သူတို့ကို ဘယ်သူက အခွင့်အရေးပေးတာလဲ။ ကားမျက်မှန်အတု ဘယ်နှစ်ထည်ရှိလဲ။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ် မော်တော်ကားမှန်များ တင်သွင်းသူ Fuyao Group ၏ မကြာသေးမီက အတုအပ ဆန့်ကျင်ရေးသတိပေးချက်နှင့် အတုအပ ရှားပါးသော မော်တော်ယာဥ်မှန်များအကြောင်း အဓိက မီဒီယာများ၏ အစီရင်ခံစာများကို ကြည့်ပါ။
မူရင်းကားမှန်အတုနှင့် အမိုက်စား ကားမှန်သည် လက်ထဲတွင် နီးကပ်နေပြီဖြစ်သည်။
ကားမျက်မှန်အတု ထောင်ပေါင်းများစွာ လစဉ် ဈေးကွက်သို့ စီးဆင်းနေသည်။ ၎င်းတို့ကို ကားများတွင် တပ်ဆင်ပါက ထောင်နှင့်ချီသော မိသားစုများ အန္တရာယ်ကို တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေသည်။ ဒါက ရေခဲတောင်ရဲ့ ထိပ်ဖျားပဲ။ မတွေ့ရသေးသော မှန်အတုများနှင့် အမိုက်စား အများအပြားသည် လည်ပတ်နေဆဲဖြစ်ပြီး ယာဉ်မောင်းနှင့် ခရီးသည်အများစု၏ အသက်အန္တရာယ်ကို ခြိမ်းခြောက်လျက်ရှိသည်။
2. မှန်အတုနှင့် ရှားပါးသော မော်တော်ကားကို ထိခိုက်မှု
သက်ဆိုင်ရာဌာနများ၏ စာရင်းဇယားများအရ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း ယာဉ်မတော်တဆမှုများတွင် ယာဉ်မောင်းနှင့်ခရီးသည်များ၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သည် အရည်အချင်းမပြည့်မီသော ကားမှန်များကြောင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပြီး သေဆုံးမှုနှုန်းမှာ ၂ ရာခိုင်နှုန်း တိုးလာကြောင်း သက်ဆိုင်ရာဌာနများ၏ စာရင်းများအရ သိရသည်။ ဒီတော့ စျေးကွက်မှာ အရည်အချင်းမပြည့်မီတဲ့ မော်တော်ကားမှန်တွေရဲ့ ဘေးကင်းမှုအန္တရာယ်တွေက ဘာတွေလဲ။
ညံ့ဖျင်းသော ထိုးဖောက်မှု ခံနိုင်ရည် နှင့် အတု နှင့် တိုတောင်းသော မော်တော်ကားမှန် ၏ ရိုက်ခတ်မှု ခံနိုင်ရည် သည်- အရည်အသွေးမြင့် စစ်မှန်သော မှန်ကွဲသွားပြီးနောက်၊ အပိုင်းအစ အမှုန်များသည် သေးငယ်ပြီး လူကို ထိခိုက်ရန် မလွယ်ကူသော အစွန်းများနှင့် ထောင့်များ ကင်းစင်ပါသည်။ ကားမှန်အတု ကွဲသွားပြီးနောက် အပိုင်းအစများသည် ကြီးမားပြီး အချို့မှာ အစွန်းများနှင့် ထောင့်များပါရှိပြီး ယာဉ်မောင်းနှင့် ခရီးသည်များကို ထိခိုက်ရန် အလွန်လွယ်ကူပါသည်။
အောက်ပိုင်းမှန်သည် ယာဉ်မောင်းကို မူးဝေစေသည်- အောက်ပိုင်းလေကာမှန်သည် ခုံးခုံးမှန်နှင့်တူသည်။ ပြတင်းပေါက်မှ ယာဉ်မောင်းသူမြင်ရသည့် မြင်ကွင်းသည် ပုံပျက်နေပြီး အလင်းပုံပျက်ခြင်းဟု ခေါ်သည်။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပေမယ့် ယာဉ်မောင်းသူရဲ့မျက်လုံးတွေကို ပင်ပန်းစေပြီး ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်စေဖို့ လွယ်ကူပါတယ်။ အချိန်ကြာမြင့်စွာ မောင်းနှင်ခြင်းသည် ယာဉ်မတော်တဆမှု ဖြစ်ပွားရန် လွယ်ကူသည်။
3. မှန် မမှန် ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း။
မှန်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုကြည့်ပါ- ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကို အပူချိန်မြင့်အမှတ်အသားနှင့် အပူချိန်နိမ့်အမှတ်အသားအဖြစ် ပိုင်းခြားထားသည်။ စစ်မှန်သော မော်တော်ကားမှန်များ၏ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သည် ယေဘုယျအားဖြင့် အပူချိန်မြင့်သော အမှတ်အသားဖြစ်သည်။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖောင့်သည် ကြည်လင်ပြီး တစ်ပြေးညီဖြစ်ပြီး၊ လက်သည်းကဲ့သို့သော ချွန်ထက်သောအရာများဖြင့် ဖယ်ရှားရန်မလွယ်ကူသော၊ နိမ့်ပါးသောဖန်များ၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကို နောက်ပိုင်းတွင် ဖျန်းထားပြီး၊ ယေဘုယျအားဖြင့် အပူချိန်နိမ့်သောအမှတ်အသားဖြစ်သည်။ မှင်သည် မကြည်လင်၊ ကပ်ရလွယ်ကူပြီး မညီညာပါ။ ထို့ကြောင့် ဖောင့်နှင့် ပုံစံသည် ကြမ်းတမ်းပြီး ဖယ်ရှားရလွယ်ကူသည့် အစွန်းများဖြင့် ကြမ်းတမ်းနေပုံရသည်။
ဖန်သားပြင်ကိုကြည့်ပါ- စစ်မှန်သောဖန်ထုတ်လုပ်သူများသည် လက်ရာမြောက်သောလက်ရာရှိသည်။ အလွန်ချောမွေ့ပြီး သိမ်မွေ့သော လက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ဖန်ကွက်တစ်ခုစီပတ်ပတ်လည်တွင် အနားသတ်ခြင်းကို ပြုလုပ်ပါမည်။ မှန်အတု၏ အစွန်းများသည် ကြမ်းတမ်းပြီး ပုံမမှန်သောကြောင့် သင့်လက်များကို ခြစ်ရလွယ်ကူစေသည်။
ဖန်ခွက်ကိုကြည့်ပါ- မှန်အများစုကို ထုတ်လုပ်သည့်အချိန်တွင် တပ်ဆင်ထားသည်။ အတုနှင့် အမိုက်စား ကားမှန်များသည် ယေဘူယျအားဖြင့် ချောမွေ့သော ပန်းကန်ပြားမှန်များသာ ဖြစ်သည်။ အစားထိုးသည့်အခါ၊ သင်သည် မကောင်းတဲ့ဖန်မှန်ကိုင်ဆောင်သူကို ဖယ်ရှားပြီး အထူးကော်ဖြင့် မှန်အသစ်ပေါ်တွင် ကပ်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဒီမြင်ကွင်းကိုမြင်ရင် သတိထားရမယ်။ မှန်ကိုင်ဆောင်ထားခြင်းမရှိသော မှန်သည် အတု သို့မဟုတ် စျေးပေါသော ထုတ်ကုန်တစ်ခု ဖြစ်နိုင်သည်။
အတုအပ တံဆိပ်ကပ်ခြင်းဆိုင်ရာ မေးမြန်းချက်- ဥပမာအားဖြင့်၊ Fuyao ဆက်စပ်ပစ္စည်း အဆင်တန်ဆာတစ်ခုစီတွင် အတုအပ ဆန့်ကျင်ရေး တံဆိပ်တစ်ခု ရှိပါမည်။ အစစ်အမှန်အစစ်အမှန်ကို 40098868 သို့ခေါ်ဆိုမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
မှန်နှင့် အတုနှင့် အမိုက်စား အော်တိုမှန်များကြား ရိုးရှင်းသော ခြားနားချက်မှာ အဓိကအားဖြင့် လက်ရာနှင့် ပုံပန်းသဏ္ဍာန်ကြောင့်ဖြစ်သော်လည်း စျေးကွက်တွင် အတုယူမှု မြင့်မားသည်မှာ မှားယွင်းနိုင်သည်။ သာမာန်ကားပိုင်ရှင်များသည် မှန်နှင့် အမှားကို အော်တိုမှန်ကို ခွဲခြားရန် ခက်ခဲနေရပါမည်။ အမှားအမှန်ကို ပိုင်းခြားသိမြင်တတ်သူ ဘယ်လောက်ပဲ ကျွမ်းကျင်နေပါစေ အမှားတွေ မလွဲမသွေ ရှိပါလိမ့်မယ်။ ထို့ကြောင့်၊ ဝယ်ယူသည့်အခါတွင်၊ တရားဝင်သတ်မှတ်ထားသော ဝယ်ယူမှုလမ်းကြောင်းများကို ဖော်ထုတ်ပြီး အရင်းအမြစ်မှ ဝှက်ထားသော အန္တရာယ်များကို ဖယ်ရှားပေးပါ၊ အတုနှင့် အမိုက်စား မော်တော်ကားမှန်များ၏ အန္တရာယ်ကို ထိထိရောက်ရောက် ရှောင်ရှားနိုင်စေရန် ကျေးဇူးပြု၍